कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूले शरीरमा परिणत क्यामेराका लागि अनुहार पहिचानको प्रबर्धन | OMG समाधानहरू
कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू शरीर-पोशाक क्यामेराको लागि अनुहार पहिचानको प्रबर्धन
अनुहार पहिचानले हाम्रो एयर टर्मिनलहरू, कार्य वातावरण र घरहरूको सुरक्षा परिवर्तन गर्न सक्दछ, तथापि, कानून प्राधिकरणमा, जहाँ कसैले यो नयाँ र जटिल ब्रेक इनभेशनको सबैभन्दा तीव्र गति लिन सक्ने आशा गर्न सक्छ, यो राम्रो भएको छैन। गलतपन, गैरकानुनीपन, अवस्थिति र अप्रभावीताको आरोप मानकमा बदलिएको छ। जे भए पनि, मुख्य समस्या भनेको 'परिनियता' हो: एआई मोटर्स अनुहार पहिचान व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने यो वर्तमान वास्तविकताका लागि तयार हुनुपर्दछ। यसबाहेक, अधिक आलोचनात्मक रूपमा, आविष्कारको प्रयोग र प्रणालीकरणको वरिपरि र्‍यापहरू उचित रूपमा आर्किटेक्ट हुनुपर्दछ।
अनुहार पहिचान पहिलो व्यक्तित्व पुष्टि र पहुँच नियन्त्रण, नियन्त्रित अवस्थामा काम गर्न र एक व्यक्ति को हो कि तिनीहरूले ग्यारेन्टी छ भनेर पुष्टि गर्न को लागी बनाइएको थियो। हाल क्यामेरा स्वीप swarms, एक हेराई सूचीको साथ प्रत्येक पारित अनुहार विपरीत। यो आफैंको समस्या संग पीडित छ। जे भए पनि, जब एक खेल हुन्छ, तुरुन्तै के हुन्छ? कुन माध्यमले प्रणालीहरूले सूचनाको गुणस्तर, प्राकृतिक अवस्था र स्कोरिंग एजहरू प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछन्? कुन क्षमतामा प्रयोगकर्ताहरूले एकाग्रतालाई नवीनताबाट परिणाममा सार्न सक्दछन्?
अब ट्रान्जिटमा जन विनियोजनको साथ, यी कठिनाइहरू निर्धारण गर्न पर्याप्त राम्रो फूटि। हुन सक्छ। पुलिस शक्तिहरू प्रभावकारी रूपमा अनुहार पहिचान गर्न कोशिस गर्दै छन्, प्रयोगका केसहरूमा काम गरिरहेका छन्। अझ धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ, तर त्यो 'परिनियोजन' चुनौतीको जवाफ उनीहरूको अगाडि प्रत्यक्ष हुन सक्छ।
एक हप्ता अघि एफबीआईले अमेजनको अनुहार पहिचान गर्न कोशिस गर्दैछ भन्ने खबर एक सुरक्षा हलबाट डरलाग्दो डिग्रीले भेट्टाएको छ जसले कानूनको आवश्यकतामा अनुहार पहिचान छनौट गरेको छ। पर्याप्त भने। जस्तो देखिन्छ, एफबीआईले जनाएको मोडल जहाँ यो नवीनता प्रयोग हुन सक्थ्यो कम्तिमा झगडालु हुन सक्ने एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ: भेगास शूटर, स्टीफन प्याडॉकको अवलोकनका लागि रेकर्ड गरिएको भिडियोको लामो अवधिको विशाल संख्यालाई फिल्टर गर्दै। एफबीआईका सहायक सहायक निर्देशक क्रिस्टीन हलवारसनले नोभेम्बरमा AWS भेलामा भने, "हाम्रा अपरेटरहरू र विज्ञहरू थिए, प्रत्येक चालका लागि आठ, दिनभर काम गर्दै, तीन हप्ता प्रत्येक दिन रेकर्डिंग अनुभव गरिरहेका थिए," एफबीआईका सहायक सहायक निर्देशक क्रिस्टीन हलवारसनले नोभेम्बरमा AWS भेलामा भने।
यद्यपि असंख्य कानून प्राधिकरण संगठनहरूले अनुहार पहिचानको प्रयोग रेकर्ड गरिएको भिडियो फिल्मको विच्छेदन गर्न, समय र मेहनत खाली गर्न, वास्तविकतामा निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। सानो दृश्य रेकर्डहरू बिरूद्ध प्याक खुला स्थानमा प्रत्येक बाइस्टन्डर जाँच गर्ने अंकगणितले अनुहार पहिचान जतिसक्दो धक्का दिन्छ। केवल निरपेक्ष उत्तम फ्रेमवर्क अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले, मानक पुलिसिंगमा अझै आश्चर्यजनक रूपले न्यूनतम प्रत्यक्ष अनुहार पहिचान गरिएको छ। जे भए पनि त्यो परिवर्तन हुँदैछ।
एक अनुहारको पहिचानको विकल्पको परीक्षणको एक शक्ति भनेको लन्डनको महानगर प्रहरी हो। आधिकारिक क्रेसिडा डिकले एक बर्ष अघि भनेकी थिइन कि अनुहारको पहिचान "सुधार र अझ राम्रो र निरन्तर राम्रो हुँदै गइरहेको छ ... मलाई लाग्छ कि खुला कुराले अनुमान गर्छ कि हामीले यस नवीनतालाई कसरी उपयोग गर्न सक्दछौं र यो हाम्रो लागि शक्तिशाली र उत्पादनशील छ कि छैन भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ।" तर, डिसेम्बरमा, जब मेट पुलिसले शहरको सोहो क्षेत्रमा एउटा क्रिसमस झुण्ड किनेको लागि घरको छतमा चढेका क्यामेराको घरको साथ एउटा अवलोकन भ्यानलाई रोक्यो र आवश्यक बदमाशहरूको हेरचाहको आवाजलाई रोक्न खोज्यो, यसले सुरक्षा अभियानकर्ताहरूको एउटा छुट्टै प्रतिक्रिया देखायो। बिग ब्रदर वाचको प्रमुखले यसलाई “पुलिसको समय र खुला नगदको डरलाग्दो दुरुपयोग” भने र भने कि “पुलिसले यो खतरनाक र असभ्य आविष्कार छोडेको धेरै नै भयो।”
नवप्रवर्तनको लागि शंकास्पद कोणहरू पत्ता लगाउँदै, मेट पुलिसले लक-इन गर्नको लागि यसको स्पष्टता स्पष्ट गरेको छ। इभान बालहटचेट, प्रत्यक्ष अनुहार पहिचानको लागि मेटको प्रमुख नेतृत्व, डिसेम्बरमा एक घोषणामा भनेका थिए: "हामी यस साझेदारहरूको एक विस्तृत श्रृंखलाको साथ चित्रण गरिरहेछौं, जसले यस नवीनताको हाम्रो उपयोगलाई प्रभावकारी रूपमा चुनौती दिन्छन्; ताकि स्पष्टताको संकेत दिन र उपयोगी छलफल अगाडि बढ्नका लागि हामीले यस व्यवस्थामा अनुहार पहिचान इनोभेसनको प्रयोगको बारेमा फरक दृष्टिकोणले मानिसहरूलाई र भेलालाई स्वागत गरेका छौं। ”
अनुहार पहिचानको सट्टा बडी क्यामले भर्खरै ठूलो मात्रामा विनियोजन देखेको छ। शरीरमा लगाउने भिडियो ग्याजेटहरूले अब पुलिस प्रशासनलाई विश्वव्यापी रूपमा सुशोभित गर्दछ, प्रमाण प्रशासन, आधिकारिक कल्याण र खुला सान्त्वना दिँदै। शारीरिक वा क्लाउड-आधारित स्टकपाइलि frame फ्रेमवर्कहरूमा अफलोडिंगका लागि बॉडीक्याम रेकर्ड फिल्म। केही बॉडीक्यामहरू थप लाइभ स्ट्रिम भिडियोहरू नियन्त्रण कोठामा फिर्ता। अन्य हतियार होलस्टरमा जडान हुन्छ परिणामस्वरूप भिडियो रेकर्डि। ट्रिगर गर्न। सेल फोन अग्रिम रूपमा, सेलफोन चरणहरूमा निर्भर बॉडी क्यामको अधिक अप टु डेट मोडेलहरू अझ बढी प्रभावशाली हुन सेट गरियो। यसको अर्थ दुई प्रगतिहरू पूरा हुनेछन्। बॉडीक्याममा अनुहार मान्यता एक स्पष्ट निम्न चरण हो। आवश्यक हुडलमहरूको प्रबन्धको साथ अधिकारीहरूलाई सक्षम गर्दै, उत्साहका मानिस, हराइरहेका युवाहरू, रक्षाविहीन वयस्क-अप ... रुनडाउन जान्छ।
अझ बढी, यो भर्खर शुरू भएको छ।
डिसेम्बरमा, जब लन्डनले आफ्नो हरियो भ्यानबारे छलफल गर्यो, अनुहार पहिचानको एक वैकल्पिक परीक्षण विभिन्न ब्रह्माण्डको 'शहर' मा एक विशाल संख्या मा दूर रहेको थियो। यो परीक्षणले सुविधाहरू उत्पादन गरेन। यो अनपब्लिक थियो। यसको सूक्ष्मताहरू अज्ञात थिए। हुनसक्छ यो, यो ब्लिडि--एज पोलिसिंगमा अनुहारको पहिचान कसरी पठाइने छ भन्ने कुराको लागि यो अधिक महत्वपूर्ण छ। त्यस्तै लन्डनको साथ, यस परीक्षणले शहरको बुलेभार्डमा करीव २,००० व्यक्तिको वाच रन्डउनको साथ लग्यो। जे भए पनि, यो परीक्षण सीसीटीभी वा अवलोकन व्ह्यानको सट्टा बडी क्याममा अनुहार पहिचानसहित 'रोक्नुहोस् र खोज्नुहोस्' मा केन्द्रित भयो। परीक्षणमा यस्तै दृश्य सूचीबाट लगातार काम गर्ने ग्याजेटहरू लगाउने केही अधिकारीहरू समावेश थिए। केही घण्टाको शुरुवातमा दुईवटा क्याप्चर ती बोडी क्यामबाट प्रभावी अनुहार पहिचान म्याचहरू पछि गरिएको थियो। संदिग्धहरु हाल अभियोग लगाईएको छ।
रोक्नुहोस् र खोजी आफै विवादास्पद हो। त्यस्ता शक्तिहरु प्रोफाइलि and र झुकाव र अधिग्रहणका सवालहरु लाई अघि बढाउँदै सहमति गरेर प्रहरीको केन्द्रमा जान्छन्। विश्लेषणको बावजुद, यो विशाल शक्तिशाली हुन जान्छ, सडकबाट हतियार लिने र लक र कुञ्जीमुनि ती मानिसहरूलाई समात्ने। चरित्र पुष्टिकरण रणनीतिको एक प्रमुख अंश हो। जस्तै रोकिनु पर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्दै। अनुहार पहिचान ग्यारेन्टी व्यक्तित्व सहित बॉडीक्यामहरू समातिन्छ र ठीक रूपमा जाँच गरिन्छ, सबै कानून र दृष्टिकोण अनुसार। ज्ञात दोषी पार्टीहरू, षडयन्त्रका मानिसहरू - चाहे फरक वा फरक पर्दैन,
असुरक्षित नाबालिग र ठूला-अपहरू, सबै विचार गरिएका सबै चीजहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। ज्ञानको मार्गनिर्देशनको रूपमा एज कलि pol्ग क्राइस्ट ड्राइभिंगले वास्तविक फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। माथि उल्लेखित क्याप्चरहरू केवल त्यस्ता रणनीतिहरू द्वारा कल्पना गर्न योग्य बनाइएको थियो। यस अवस्थामा, यसले शहरमा बडी क्यामहरू व्यक्त गर्ने प्रक्रिया ल्यायो। नतिजा incontestable थिए।
सीमा सेट गर्दै:
शरीरको क्यामेरामा अनुहार मान्यताको उपयोगले अतिरिक्त रूपमा जातीय प्रकोपको आरोपको विरूद्ध प्रतिरोध प्रस्ताव गर्दछ। दृष्टिकोण अनुहार पहिचान द्वारा चिनिएको पहिचान नभएका ती अधिकारीहरुलाई टाढा गर्न को लागी सेट गर्न सकिन्छ, रोकिए पछि पनि। जहाँ आरोप लगाइएको छ र रोक्नुहोस् र ओभर-पोलिसिस स्पष्ट नेटवर्कमा कम-स्तर गल्ती कार्यहरू खोज्नुहोस्, बडी क्याममा अनुहार पहिचानले एक बराबरीको प्रस्ताव गर्दछ। यो यस प्रकारको शिल्डिंग हो जसले अझ विस्तृत विनियोगलाई छोटो बनाउन मद्दत गर्दछ।
शरीर क्यामेरामा अनुहार मान्यताले पर्यवेक्षण सवारी साधन र सीसीटीभी क्यामेराबाट मिल्दो सहयोगको लागि पुष्टिकरण प्रदान गर्दछ। अन्तर्निहित म्याचको अनुसरण गर्दै, एक अधिकारी हिँडेर एक व्यक्तिको नजिक जान्छ र बडी क्यामबाट दोस्रो चेक चलाउँदछ, ठीक उही समान वाच सूचीबाट चालु। बस यदि त्यहाँ त्यस्तै एक खेल केहि पनि लिएको छ। आफैंमा, यो मिल्दो गलत पोजिटिभ बिरूद्ध संरक्षण गर्दछ। यो अतिरिक्त क्याप्चर मा कुनै अन्तिम निष्कर्ष बनाउनु अघि एक व्यक्ति संग सम्बन्धित व्यक्ति लाई दिन्छ।
एज कृत्रिम बुद्धि मा काम:
यो अनुहार पहिचानको प्रणालीकरण हो जुन हामी तुरुन्तै देख्छौं। समान क्यामेरा रेकर्डको लागि विभिन्न क्यामेराको लिंक, र एक अर्कामा। सेल फोनमा ह्यान्डलिंग सार्नाले किनारा-ज्ञानको अधिक व्यापक फाइदाहरू खोल्छ। सेल फोनमा नक्कल बुद्धिमत्ता जुन एक अर्कासँग जडान गर्न सक्दछ केवल एक केन्द्र केन्द्र बिन्दुमा। विभिन्न, खण्डित, र सिnch्ख्रोनाइज वाच रेकर्डहरूबाट चालु राख्नको लागि क्षमता। सबै जीवित र निरन्तर छन्।
घटना छ कि त्यहाँ एक घटना छ, ज्ञान तस्वीर परिवर्तन को रूप मा, सबै क्यामेरा - बॉडी क्यामहरु सहित - लगातार ताजा गरीन्छ। यसको वैकल्पिक फाइदा भनेको अन्तर्निहित म्याच दिनको लागि किनार-वार बॉडीक्यामको उपयोग गर्ने सम्भावना हो, बन्डललाई मूल रूपले सानो बनाएर, त्यस बिन्दुमा मिल्दो बर्ष एक समान एआई मोटरको प्रयोग गरी फोकल क्लाउड-आधारित ढाँचामा पठाइन्छ। मोटर, वा धेरै एआई मोटर्स, कुनै पनि 'समन्वय' प्रशासकलाई प्रदर्शन गर्नु अघि पर्याप्त पर्याप्त सटीक च्यानल दिन। बहुमत केहि सेकेन्डमा देखा पर्नेछ।
परिणामहरू 100% त्रुटिहीनको नजिक हुनेछ।
यो वर्ष हो:
यो वर्षको अनुहार हुनुपर्दछ जब अनुहार पहिचानले अज्ञात झुकाव र त्रुटि को आरोप हिलाउँछ। यो वर्ष हुनुपर्दछ जब एउटा पुष्टिकरण हुन्छ कि सबै अनुहार पहिचान प्रगतिहरू बराबर हुँदैनन्। बिभिन्न उपकरणहरू विभिन्न उद्देश्यका लागि प्राप्त गर्नुपर्दछ। साथै, नियन्त्रित अवस्थामा यस्ता मोटर्सको बाँझो मूल्या्कनले वास्तविक ग्राहक सन्दर्भ र परिणामहरूको पुष्टिकरणको लागि दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
गतिविधिमा बडीक्यामको मूल आज प्रमाण प्रशासन फ्रेमवर्कको लागि खाता भिडियोमा केन्द्रित छ। वर्तमानमा, बॉडीक्याम २.० ले एकाग्रतालाई प्रत्यक्ष भिडियो स्पिलि,, अनुहार पहिचान र अन-ग्याजेट एज-एआईमा सार्नेछ। आईओटी बॉडीक्यामको यो माथि र आउँदै गरेको युगले अरबौं अन्य आईओटी ग्याजेटहरूमा सामेल हुनेछ जुन G जी र G जीमा पठाइनेछ आउँदो वर्षहरूमा। व्यवस्था मिलाउन, जानकारी साझा गर्न, किनाराबाट ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि भाग ह्यान्डगेस गर्नका लागि योजना बनाइएको, यी ग्याजेटहरू आधारभूत पुलिसिंग उपकरणतर्फ भिडियो रेकर्डिंग केही अप्रत्याशित मामिलामा 'बाट टाढा बढ्नेछ। अन्तमा, इन्मिमिlingले हेर्नेछ कि शरीरको क्यामेराका प्रकारहरू आज कम्फर्टाइज्ड, विशाल स्क्रिन सेल फोनमा रूपान्तरण हुनेछन् जुन किच एआई परीक्षाको साथ समात्ने क्षमता र स्पिलिंग क्षमतालाई समेट्दछ र अत्याधुनिक अधिकारीसँग समृद्ध जानकारी परिचय। एकल-कारण रेकर्ड-मात्र क्यामेराको अवधि अन्त्यमा आउँदैछ।
अनुहार पहिचानको लागि, 2019 मा छलफल र कन्टेन्टन प्रचार र व्यापार सुरक्षाको लागि क्षमताको पूर्ण अनियमित रोजगारको वरिपरि हुनुपर्छ। सिलिकॉनमा सिमुलेटेड बुद्धिमता मोडल आईपी क्यामेरा सम्मिलित गरियो, सबैका लागि उपलब्ध। मैले व्यवसायिक उपक्रम, विद्यालय, कलेजहरू, सम्भवत: नजिकको हेराई योजनाहरू षड्यन्त्रका मानिसहरुको आफ्नै हेरचाहको व्यवस्था गरीरहेको वा ओपनसोर्स डाटाबेसको प्रकाशमा राख्नु पर्ने चिन्तामा मैले अगाडि वर्णन गरें। कानूनको प्राधिकरणमा यस नवीनताको उपयोग यति ध्रुवीकरण हुन रोकिनेछ।
यसैले, पोलिसि concerned सम्बन्धित हदसम्म, 2019 अनुहार पहिचानको लागि परिभाषित क्षणको रूपमा अलग सेट गरिनेछ। परीक्षण संगठनमा रूपान्तरण हुनेछ। व्यवस्थाले परिणाम दिनेछ। झगडा जित्नेछ। प्रायः सामान्य समाजले अन्तिममा गृह सुरक्षा र विवेकी संरक्षणको बारेमा राम्रो निर्णय गर्दछ। सीमितताहरू र दिशानिर्देशहरूको लागि असंख्य कलहरूका बाबजुद, हालको हप्ताको लागि गरिएको एक समीक्षाले पत्ता लगायो कि एक्लो एक्सएनयूएमएक्स% अमेरिकीहरूले अनुहार पहिचानलाई ध्यानपूर्वक खुला सुरक्षाको हानिमा बाधा पुर्‍याउनुपर्दछ। साथै, यो स्थान बडीम क्याम्सले आफ्नो छाप बनाउनेछ। बन्दको अवसरमा हामी प्रत्येक पुलिसलाई प्रत्येक ज्ञात दोषी पार्टी, षड्यन्त्रको प्रत्येक अज्ञात व्यक्ति, प्रत्येक असहाय हुर्केका वा हराएको बच्चालाई, एक 18% वा अधिक उल्लेखनीय परिशुद्धतामा जानको लागि हाम्रो पुलिसहरू तयार गर्न सक्दछौं, हामी चाहन्छौं। सबै कुरामा विचार गरीन्छ, वर्तमानमा हामी गर्न सक्छौं।
कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू शरीर-पोशाक क्यामेराको लागि अनुहार पहिचानको प्रबर्धन पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: डिसेम्बर 5th, 2019 by व्यवस्थापक
4081 कुल दृश्यहरू2हेराइ आज